Xijaabku waa astaan gumaysi – Kaasho Maanka
Marada wayn ee dumarku dhex galaan loona yaqaan xijaabka maxay tahay ujeedka loo xidho? Yey diinta islaamku ku waajibisey? Ma diin baa mise waa dhaqan carbeed? Dhaqanka carbeed iyo diintu maxay kala yihiin? Waydiimahan iyo qaar badan oo kale si aan uga jawaabno waa inaan dul istaagno aayadaha iyo axaadiista ka hadlaya jawaankaas haweenka lagu duubay iyo ujeedka laga lahaa.
Horta ereyga Xijaab waa erey af-carbeed ah oo afkeennana ku noqonaya xayndaab ama daah, sida ku cad aayaddan quraanka ah (ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻚ ﺣﺠﺎﺏ) oo micneheedu yahay “waxbaa inoo dhexeeya labadeenna”, xijaab waxa kale oo lagu qeexaa teedka ama wax kasta oo laba shay kala qariya.
(كل ما حال بين شيئين فهو حجاب)
Aayadaha Quraanka ee ka hadlaya xijaabka ee dadka maanta nooli u daliishadaan xirashadiisa iyo sababta ay usoo degeen iyo ujeedka ka danbeeyeyba aan isla eegno.
Suurada Al-Axsaab aayada 59aad waxay leedahay;
(ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻗﻞ ﻷﺯﻭﺍﺟﻚ ﻭﺑﻨﺎﺗﻚ ﻭﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺪﻧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻼﺑﻴﺒﻬﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺩﻧﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻦ ﻓﻼ ﻳﺆﺫﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮﺭﺍ ﺭﺣﻴﻤﺎ)
Waxaa la sheegaa in aayaddani kusoo degtey haweenka nebiga oo bannaanka u aadi jirey si ay xaajadooda u soo gutaan maadaama aanay jirin waqtigaas suuliyo. Waxaase dhici jirtey rag magaalada joogey oo shaxaariyiin ahaa inay haweenka dabo geli jireen ilaa bannaanka si ay u daawadaan jidhkooda qaawan ama mararka qaar gacmahaba ula tagaan ogolaansho la’aanna taabtaan jirkooda taasoo ah waxa aynu maanta ugu yeerno Sexual Harassment. Dhacdooyinka noocan ah oo markii danbana dumarka nabiga saameeyey ayay aayaddani ku soo degtey oo amartay inay wejiga qarsadaan dumarka kuwooda xorta ahi si loo kala garto ama loo kala sooco haweenka xorta ah iyo kuwa addoomaha ah oo xadgudubyada jinsi ee aan xusnayna ugu ekaadaan oo kaliya dumarka addoomaha ah. Islaamku addoomaha ma farin inay xijaab xirtaan oo cawradoodu waxay lamid tahay ta ninka.
Aayadda 53aad ee suuradda Al-Axsaab waxaa ka mid ah ereyadan (ﻭﺇﺫﺍ ﺳﺄﻟﺘﻤﻮﻫﻦ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻓﺎﺳﺄﻟﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺣﺠﺎﺏ) oo ujeedkuna yahay in haweenka nebiga marka asxaabtu wax ka rabaan aanay u gelin balse daaha ama marada teedka ah iyagoo aan ka gudbin ay wax waydiiyaan, taasina waxay gaar u ahayd haweenka rasuulka. Aayad kale ayuu Illaahay ku sheegay haweenka nebigu inaanay la mid ahayn haween waynaha kale ee Muslimiinta (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء). Xukunka aayadda sare ku xusani waa xukun u gaar ah haweenka nebiga laguna farayo inay ragga kala hadlaan maro ama daah gadaashiisa, taas micneheedu maaha maro wayn oo sida ta hadda Xijaabka loo yaqaan ah balse waa wax kala xadaynaya haweenka nebiga iyo qofka ugu yimaada cilmi kororsiga ee su’aalaha waydiinaya.
Aayadda 31aad ee Suuradda Al-Nuur qaybo kamida waxa lagu farayaa haweenku inay naasohooda qariyaan maadama ay caado ahayd inay naasohooda iyo qoortooda muujiyaan haweenkii carbeed ee waagaa noola (ﻭﻟﻴﻀﺮﺑﻦ ﺑﺨﻤﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻮﺑﻬﻦ).
Al-Qurdubi tafsiirkiisa aayaddan wuxuu ku leeyahay waa inay qariyaan naasohooda
qaawaan “استدال الستار لتغطية صدر العاري” balse maradan wayn ee aynu maanta naqaan aayaddu kamaba hadlayso.
Waxaa jira xadiis nebiga laga weriyey oo uu leeyahay gabadha qaan-gaadhka ah lagama aqbalyo salaad haddii aanay khimaar saaran shafka. Taasoo micneheedu yahay in markay tukanayso haweenaydu shafkeeda qariso (لا تقبل صلاة الحائض (البالغ) الى الخمار).
Waxa kale oo la sheegaa in Saxaabigii cunsuriga ahaa ee Cumar Binu Khaddaab uu daba geli jirey xaasaskii nebiga isagoo uga dan lahaa in xijaabka la waajibiyo si ay ugu sahlanaato kala soocidda gabadha xorta ah iyo midda addoonta ah oo ay soo sheegnay inay dhib la kulmi jireen marka ay xaajo gudasho u baxaan.
ﺭﻭﻯ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻦ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺮﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﻊ ﻭﻫﻮ ﺻﻌﻴﺪ ﺃﻓﻴﺢ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺣﺠﺐ ﻧﺴﺎﺀﻙ ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ، ﻓﺨﺮﺟﺖ ﺳﻮﺩﺓ ﺑﻨﺖ ﺯﻣﻌﺔ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻋﺸﺎﺀ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻨﺎﺩﺍﻫﺎ ﻋﻤﺮ : ﺃﻻ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎﻙ ﻳﺎ ﺳﻮﺩﺓ ، ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ : ﻓﺄﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺏ (صحيح البخاري).
Sida ku cad xadiiska sare Cumar Binu Khadaab wuxuu dabo geli jirey haweenka nebiga ee bannaanka u baxa si ay xaajo u soo gutaan kadibna waa ku qaylin jirey oo qaar ka mid ah magacyadooda ayuu ugu yeedhi jirey isaga oo ula jeedkiisu yahay inuu Maxamed ku khasbo inuu dumarkiisa ka sooco dumarka kale oo ay ka duwanaadaan si loo garto oo ayna uga badbaadaan daraabsiga shaxaariyiinta uu cumar hormuudka ka ahaa.
Sidee u aragtaa akhristaha muslimka ahaw in Cumar daawado ama dabo galo haweenka nebiga oo xaajoonaya?
Aayad kale waxay sheegeysaa haweenka aan guur sugeyn (Da’da wayn) inay iska fudeedin karaan culayska maradan Maadaama aan haweenkaas looga baqayn in raggu damaaciyaan (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن).
Nin Taliban ah oo garaacaya dumar
Sidaa aan kor ku soo sheegnay Cumar Binu Khadaab oo ahaa saxaabiga daba geli jirey haweenka nebiga si xirashada xijaabka loo waajibiyo, wuxuu waqtigii uu khilaafada hayay budh ama ul ku garaaci jirey dumarka addoomaha ah ee xijaabka xidhan isagoo leh “Ma xorta ayaad isu ekaysiinaysaan?”
نصب الراي 4/250 . (ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﻗَﺎﻝَ : ﺭﺃﻯ ﻋُﻤﺮُ ﺃﻣﺔً ﻟﻨﺎ ﻣﺘﻘﻨﻌﺔ ﻓﻀﺮﺑﻬﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ : ﻻ ﺗﺸﺒﻬﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﺋﺮ)
Xadiiskan waxaan ka dheehan karnaa ama ka fahmeynaa in xijaabku yahay maro takoor oo loogu talo galay in lagu kala garto haweenka xorta ah iyo kuwa addoonta ah. Cumar wuxuu raalli ka ahaa in la daawado jidhka haweeneyda addoonta ah ama si gaara xadgudubyada loola beegsado taasna nabigu waa ka ogolaaday oo aayadaha xiaabka ayuu soo dejiyay, halkaas ayayna ku luntay xuquuqdii gabadha addoonta iyada oo markii horeba aanan xaq haysan oo Ilaaha iyo Maxammed raalli ka ahaayeen in la addoonsado.
Waxaa kale oo la sheegaa in Cumar Binu Khadaab uu lahaa addoomo kumanaan dhaafaya oo weliba ay u adeegi jireen iyagoo qaawan oo timohoodu taabanayaan naasohooda, maadaama cawrada addoontu tahay inta u dhaxaysa xudunta/xundhurta ilaa ruugga/jilibka sida ragga.
“عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : ” كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ”
إرواء الغليل (6/ 204)
Ujeedka xijaabka ama marada xayndaabka loo sharciyeeyey waxay ahayd;
Inaan asxaabta nebiga u gelin haweenkiisa iyagoo qaawan, maadama ay guryahoodii joogaan.
Nebigu wuxuu ka baqay in haweenkiisa la damaaciyo oo nimankaas saaxiibaddii ay isku ceeboobaan, sidaa darteed ay habboon tahay in la kala qariyo iyaga iyo nimanka badan ee gurigiisa soo gali jiray.
In dumarka carbeed qariyaan horraadadooda maadaama ay caado u lahaayeen laab qaawinta.
UJEEDADA UGU WAYNSE WAXAY AHAYD ASTAAN CUNSURIYADEED OO LOOGA DAN LAHAA IN LAGU KALA GARTO HAWEENKA XORTA AH IYO KUWA ADDOONTA AH.
Maanta addoonsi ma jiro, bannaankana looma xaajo tago sidii qarnigii toddobaad. Ma jirto sabab ku qasbeysa haweenku inay xidhaan maro astaan takooreed ah oo waqtigeedii iyo asbaabtii loo keenayba meesha ka baxeen.
Marada madaw ee xijaabka, niqaabka wejiga lagu xidho iyo waxyaabo badan oo diinta islaamka ku jira waa dhaqan carbeed oo duuga sidaa darteed dhaqan dooris in magaca diimeed la inoogu soo qariyo maaha mid la ogolaan karo.
matihid ila mid falsafiyadu madaxa ka gashey un cunsuri hadii la dhahana waa adiga hadalanna waa kuwo gaalnimo ah waxaadna ku dureysa rasulka alle scw iyo saxabadiisa naxaris iyo nabad galiyo dushoda ha ahaate ,wax cilmi kuma dhisno warkaadan ee waa hadal copy paste ah , war heedhe wax nool ma tihide Ka xisho Rabiga ku uumey iyo Rasulkiisa scw
War nin yhw wax xaqiiq ah noo sheeg
wxaan umalynayaa inaad thy kooxa diimeedyada loo qoro diimaha qaladka ah si ay dadka umarin habaabiyaan wxaad na kamid thy shiicada mxaa yeelay ayagaaa caaya khulafaa u raashidiinka qof aan diin haysan xataaa maahan wuxuuu rimeysan karo
Hhh ala Maangaabsanidaa walee waad daali doontaa Hoog iyo silicna wad ku danbeyn doontaa hadii aanad tawbad keenin
Orod aduu hooyadaa wlshaa edada iyo gabadhaada soo qaawi oo xijaabka kasoo dhig hadii waxa aad sheegyso aad rumaysanthy
W/Q: Khaled Hassan 5th September 2018